Tsanangudzo:cob led grow light,led grow light,led grow light cob,full spectrum led grow light,2000w led grow light,
Zvigadzirwa zve PH-B-L4 , isu tiri vashandi vanobva kuChina, cob led grow light , led grow light vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve led grow light cob R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Phlizon 2000W Dyara LED COB Yakazara Spectrum
Phlizon 2000w Cob Yakakatakurwa Chiedza Chiedza
COB 2000w Yakatungamirirwa Kukura Chiedza Hydroponic
Phlizon 2000w COB LED Ongororo
Phlizon 450W COB LED Kukura Chiedza
Hydroponics 450w COB LED Kukura Chiedza
COB LED Kukura Chiedza cheBasement Planting
450W Full Spectrum COB LED Kukura Chiedza
Best COB LED Kukura Mwenje Moto Sale
Phlizon Veg Flower CREE COB Kukura Chiedza
Plozon Cob Yakakwira Kukura Kwekudenga Chiedza 2000W
Zvibereko Zvakakwirira Mbeu Yakanakisisa Yakakura Mwenje 2019
Diy Best Cob Chip Yakakura Kukura Chigadziko
CREE LEDs COB LED Kukura Chiedza
Yakakurumbira X4 Cob LED Kukura Chiedza Tengesera
Chii chinonzi COB LED kukura mwenje? Ongororo yeiyo yakanakisa COB LED Kudza Mwenje paMusika. ... COB - iyo inomirira [Chip-on-Bhodhi "- iko kusimudzira kwazvino muUTHA hwekurongedza tekinoroji uko akawanda maLEC machipisi akaiswa zvakananga...
Phlizon 450w COB LED Kura Chiedza Ongororo NEI COB KUTI ISHURE SEZVIMWE PASI PESI NEZVIMWE ZVAKANYA MAHARA? Eya, uyu waive mubvunzo wekutanga mupfungwa dzangu kana ndasvika pakuziva nezve COB mwenje seyakareruka. Asi, kana ini ndasvika pakuziva...
Phlizon Veg & inoyerera COB 2000W COB LED inokura mwenje inoratidza iwo achangobva kuitika mune yemukati yekudyara gadheni nzvimbo. Chirevo cheChip-pane-Bhodhi, COB inopa akawanda mabhenefiti pamusoro pechinyakare sarudzo. Ivo vanoshandisa imwe...
Phlizon 450W COB LED Kura Mwenje Sei Sarudza Cob LED Plant Taa? A Cree grow light ndeyenzira yekuvhenekera ine maLES akagadzirwa nekambani yeCree. Cree inogadzira mamwe epamusoro-sviki mabudiro eUSs muindasitiri. Uyezve, ivo zvinoshamisa kubata,...
Phlizon 2000W COB LED Kura Chiedza Zvakanakira zvePhlizon 2000W COB LED Kura Chiedza Modular uye inobudirira dhizaini. Yakanyatsoiswa CATT COB. Yakazara spectrum kugona. Yakanakisisa PPFD kukosha muchikamu. Yakanyanya Kunobudirira Chiedza. Nzvimbo...
Phlizon High Quality 2000W COB LED Mwenje Mazhinji mazhinji emazuva ano uye epamusoro mhando COB mwenje mwenje vane chena wavelength mukuwoneka kwavo. Iyo chena spectrum inogadzirwa neyegirini, yero uye orenji wavelengths. Zvidzidzo zvakawana kuti...
Phlizon 2000W Dyara LED COB Yakazara Spectrum Kukura Chiedza Rubatsiro rwe COB LED Kuka Mwenje Ivo vanopa yakawanda denser uye yakanyanya mwenje vachienzanisa nemamwe akajairwa [SMD "LED Kurera mwenje." Sezvo sosi yechiedza ichange...
Phlizon 2000w Cob Yakakatakurwa Chiedza Chiedza Chii`sa COB LED? COB inomiririra Chips Pabhodhi - haina kuita basa rakanaka ichiratidza mabhenefiti kana mutsauko we COB mwenje. Kuti unzwisise mashandiro anoshanda, zvakakosha kuti uzive chaiwo...
Phlizon COB 2000w Yakatanga Kukura Chiedza Hydroponic COB LED ikure mwenje inogara ichiita kupfuura yakajairika LED inokura mwenje wekufanana kwekutarisa. Yakanakisa COB LED Kura mwenje inogona kukwikwidza neyakajairika kukura magetsi mwenje ne10%...
Phlizon 2000w COB LED Ongororo Kutarisa pamhando, kugona, uye mushandisi mhinduro isu tinokurudzira kuti uongorore Phlizon 2000W COB LED inokura mwenje wechiitiko chinokura chikuru. Phlizon inonyatso kuzivikanwa LED ikure mwenje mugadziri, isu tine...
Phlizon 450W COB LED Kukura Chiedza Kubatsirwa Aya maviri akasimba kupfuura mamwe ose emagetsi eCOB POBONZO ndiyo yakakosha uye iyo yakakwana yakawanda yezvirimwa. Nharaunda yacho inobatsirawo uye ndinofarira kuti vanokupa zvakawanda zvakawanda...
Hydroponics 450w COB LED Kukura Chiedza Izvo zvinokonzerwa ne LED zvinokura magetsi zvakanyanyawo kudarika mumakore mashomanana apfuura, izvo zvinokonzera kukwidza kwe LED kukura magetsi kusimba. Vaya vave vachishandisa magetsi eHPS kwemakore...
Unit Price: USD 240 - 250 / Piece/Pieces
Chii COB LED chip? COB (Chips paBhodi), inyanzvi itsva yekugadzira LED ye LED injini. Multi LED chips zvakatunganidzwa pamwe chete semutambo wekuisa. ... LED (chiedza chinonzi emitting diode) chikombiji chitsva pamwe nekushandisa kwekuchengetedza...
Chii Cree COB LED? Cree inotanga wechipiri-chizvarwa chepamusoro-mashizha COB LEDs. ... Cree yakazivisa wechipiri-chizvarwa cheCXA High-Density chip-on-board (COB) yemhuri yeChina, ine midzi mbiri yekutanga inopa 6-9 kana 9-mm light emitting surface...
Best COB LED Kukura Mwenje Moto Sale Ndeapi musiyano pakati pe LED uye COB LED? Asi musiyano pakati pechiedza cheCOB uye SMD ndechokuti COB LEDs dzine diod dzakawanda. COB chips zvinowanzove ne 9 kana kupfuura diodes. ... Nemhaka yeizvi, COB Mwenje...
Phlizon Veg Flower CREE COB Kukura Chiedza Iko POBzon POB lights inopenya zvisikwa zvipi zvayo maererano nezvakabuda uye zvinoratidzika. Vanodhura zvishoma, asi simba rinowedzera nemigumisiro iri nani iyo yeruzhinji ichakupa zvinopfuura kukurudzira...
Phlizon COB LED Indoor Grow Light 2000W Phlizon 2000W COB LED Kukura Chiedza Features Zvishandiso 451 watts - kuchengetedza ne50% pamubhadharo wako wegetsi pamusoro peHID Yakangofanana ne 800 Watt HID system - asi inodhura zvishoma kutenga uye...
Unit Price: USD 245 - 255 / Piece/Pieces
Zvibereko Zvakakwirira Mbeu Yakanakisisa Yakakura Mwenje 2019 Phlozon`s COB series dzinokura chiedza zvinokonzera mashizha ose emwenje anokwanisa kunyatsogadziriswa nemiti yekusika.Best full Spectrum yakagadzirirwa kuenzanisa zvakakura nzvimbo...
Unit Price: USD 152 - 161 / Piece/Pieces
Diy Best Cob Chip Yakakura Kukura Chigadziko Phlizon`s COB series dzinokura chiedza zvinokonzera mashizha ose echiedza anogona kunyatsogadziriswa nemichero yekugadzira.Best full Specturm yakagadzirirwa kuenzanisa zvakakura nzvimbo dze indooor miti,...
CREE LEDs COB LED Kukura Chiedza Pros Of LED Kukura Mwenje Mazuva ano mazuva ano LED magetsi anosimudza zvinogona kukwikwidza kugadzirwa kweHPS magetsi anoshandisa inenge kaviri mumvura, izvo zvinowedzera kuwedzera mari yekuchengetedza mari. LED...
Yakakurumbira X4 Cob LED Kukura Chiedza Tengesera LED dzinokura mwenje dzinoshamisa zvechokwadi nekodhidhiya yezuva ranhasi uye ndiyo inonyanya kunyatsogadzirisa mhando yekugadzira inopiwa. Inoshandiswa mune dzakawanda zvemazuva ano anonyanya...
China PH-B-L4 Vatengi